Dagaal dhexmaray ciidamada Hindiya iyo Pakistan | Berberanews.com
Home WARARKA Dagaal dhexmaray ciidamada Hindiya iyo Pakistan
Ciidamada Shiinaha iyo Hindiya ayaa la sheegay in mar kale uu isku dhac ku dhex maray xadka, iyadoo labada dhinacba uu dhaawac ka soo gaaray dagaalkaas, sida ay sheegtay warbaahinta Hindiya.
Dagaalka ayaa Arbacadii la soo dhaafay ka dhacay waqooyiga gobolka Sikkim. Ciidamada Hindiya ayaa sheegay in dhacdada ay ahayd mid la xalliyay.
Xiisadda ayaa aad u sarreysa iyadoo xadkaasi uu yahay kan ugu muddada dher dunida ee uu muran ka taagnaa. Labada dhinac ayaa sheeganaya in ay maamulaan deegaanno badan oo xadka ah.
Ugu yaraan 20 ciidamada Hindiya ka tirsan ayaa bishii June ee la soo dhaafay ku dhintay deegaanka skirmish ee Ladakh.
Siduu u dhacay dagaalkii ugu dambeeyay?
Waxay ka dhacday Nathu La pass ee waqooyiga Sikkim, sida ay warbaahinta sheegtay. Gobolka Sikkim wuxuu u dhaxeeyaa Bhutan iyo Nepal, wuxuuna 2,500km (1,500 meyl) bari kaga beegan yahay deegaanka Ladakh.
Ciidamo roondo ah oo Shiinees ah ayaa isku dayay inay galaan dhanka Hindiya, dib ayaana loo soo riixay, sida ay saraakiishu sheegayaan.
Warsaxaafadeed ay soo saareen ciidamada Hindiya ayaa lagu dhayalsaday dhacdadaas, iyadoo lagu sheegay in isku dhac yar uu dhacay 20-kii January 2021, isla markaana la xalliyay
Wararkii ugu dambeeyay ee isku dhacyada waxay muujinayaan sida ay weli u kulushahay xiisadda. Warka ciidamada Hindiya ayaa lagu xusay in labada dhinacba ay daneynayaan in wada xaajoodyada ay furnaadaan isla markaana aysan dooneyn inay carqaladeeyaan hannaanka.
Waxay dhowr jeer yeesheen wada hadallo heer militari ah si loo dejiyo xiisadda balse weli waxba kama miro dhalin.
Ciidamada ayaana weli isku dhacyo ay ku dhex marayaan xadka.
Saraakiil hore oo ciidamada Hindiya ah ayaa sheegay in isku dhacyada aanan laga fogaan karin. Balse waxay isku raaceen in wada hadallada loo baahan yahay inay sii socdaan maaddaama labada dalba aysan dooneyn dagaal.
Previous articleBarta Afsoomaaliga Barta Q-9aad ARROWEELLO Maqashee
Next articleDawladda Itoobiya oo ka hadashay warar laga baahiyay xaaladda Abbiy Axmed